Coral Reef: တို့မေမေ
အပြုံးပန်း said on September 14, 2010 at 5:26 AM
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ၊
မလေး said on September 14, 2010 at 5:46 AM
သက်ဝေ said on September 14, 2010 at 7:55 AM
ညီမရဲ့ မေမေ့ မွေးနေ့အတွက် ညီမနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လာဆုတောင်းပေးပါတယ်...
အသက်ရှည် အနာမဲ့ပြီး ကျန်းမာချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့...
noblemoe said on September 14, 2010 at 9:36 AM
Rita said on September 14, 2010 at 9:49 AM
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
အင်ကြင်းသန့် said on September 14, 2010 at 11:12 AM
မမ....ဂျင်းက နောက်ကျသွားပြီထင်တာ တော်ပါသေးရဲ့ အချိန်မှီသေးတယ်။ မဇွန်ရဲ့မေမေတစ်ယောက် ဒီနေ့ဒီရက်မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ပြီး မဇွန်ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ အရာတွေလည်း မဇွန်ရဲ့မေမေအတွက် တစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံပါစေလို့ ဂျင်းကပါ ကူပြီးဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
Anonymous said on September 14, 2010 at 2:32 PM
Thandar's may may ...kyar mar chan thar ywe ta yar htoo ta yar myat ko twae par say lo ni su taung lite par dae
နေ၀သန် said on September 14, 2010 at 3:26 PM
Happy Birthday လို့ မိုးစက်ရဲ့ အမေအတွက် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ...း)))
Shinlay said on September 14, 2010 at 8:34 PM
အမေံမွေးနေ့ မှာ အကောင်းဆုံးဆုများတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇွန်မိုးစက် said on September 14, 2010 at 9:52 PM
မေမေ့အတွက် ဇွန်နဲ့အတူ လာရောက်ဆုတောင်းပေးသွားကြတဲ့ အစ်မပြုံး၊ မလေး၊ မမသက်ဝေ၊ ညီမမိုး၊ သူငယ်ချင်းရီတာ၊ ညီမလေးဂျင်း၊ သူငယ်ချင်းနီ၊ မောင်လေးနေ၀သန်နဲ့ အစ်မရှင်လေးတို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။း)
မိုးခါး said on September 14, 2010 at 10:01 PM
မဇွန် မေမေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး သာသနာအကျိုးဆထက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးခွင့်တွေ ရရှိပါစေနော် .. ပျော်ရွှင် ကျန်းမာပါစေ ..း))
ဇွန်မိုးစက် said on September 14, 2010 at 10:13 PM
ကျေးဇူးပါ ညီမလေး မိုးခါးရေ။း)
ချစ်ကြည်အေး said on September 15, 2010 at 10:31 AM
Happy belated birthday to Zune's may may...all the best for her...
Sorry dear sis :(
for the late wish....
ဇွန်မိုးစက် said on September 15, 2010 at 1:52 PM
@sis chit, no worries.
Thanks for your belated wish too. :)